Ciidanka Jubaland oo gacanta ku dhigay xubno shabaab ka tirsan oo dilk gaystay – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidanka Jubaland oo gacanta ku dhigay xubno shabaab ka tirsan oo dilk gaystay
. Howlgal ay sameeyeen ciidamada Nabad Sugida ee maamul goboleedka Jubaland ayaa waxaa lagu soo qabta Labo ruur oo la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalameyaasha AL-shabaab sidoo kalena dil ka gaystay degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo.
Labadaan ruux ayaa la sheegay inay dileen nin lagu magacaabi jiray Bishaar Xareed oo ka mid ahaa shaqaalaha dowlada Hoose sidoo kalen ka mid ahaa ganacsatadad degmada beled-Xaawo,kadibna ay isku adeeyn inay baxsadaan balse Saraakiisha amnigu ay gacanta ku soo dhigeen.
Taliyaha ciidanka Nabad Sudiga Jubaland ee degmada Beled-Xaawo Cali Xassan Dheer ayaa sheegay in kadib Dilka ay ciidamadu howlgalo bilaabeen taasoo ugu danbayntii u suuro galisay inay gacanta ku soo dhigeen kuwii dilka gaystay.
Taliyaha ayaa intaasi ku daray inay dhawaan sharciga hor keeni doonaan shaqsiyaadkaan dilka gaystay kadibna ay ciidamada amaanku gacanta ku dhigeen.
← Lataliyaha Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay inay jiraan siyaasiin abaabulayao banaanbax dowlada ka dhan ah.
Baarlamaanka Soomaaliya oo Maanta kulan Yeelanaya. →